Nani Kuwana mumwe Higher Annual Output muna 2016
Post nguva: Mar-12-2018
2016 mumwe gore pamusoro Better Motor yokukohwa, nokuti nemakasitoma 'rutsigiro uye vashandi nani' zvakaoma kushanda. Tiri kuwana kukura uye mberi gore negore. Annual goho muna 2016 ndiyo mamiriyoni 2,9 rinovira, 450,000 rinovira kuramba zvichienzaniswa mamiriyoni 2.45 richivira 2015. Muna New Year 2017, ticharamba magumo ... Read more »
Engineer Li Dongwei kubva Ohio State University USA akashanyira Shandong Better Motor Co., Ltd
On June 8, Electric Engineering uye kushandisa michina Engineer Li Dongwei kubva Ohio State University USA akashanyira Shandong Better Motor Co., Ltd. Li Dongwei, postdoctoral muongorori kubva zvemagetsi nesayenzi rabhoritari mu Ohio State University USA, ane mbiri chiremba kukuru yemagetsi engineerin inegumi. .. Read more »
The chirongwa chikwata mashoko hurongwa ouinjiniya Chirongwa nani Motor rakaumbwa
On June 26, basa chikwata mashoko hurongwa ouinjiniya Chirongwa nani Motor rakaumbwa. Shandong Sanjiang Electric Engineering Co., Ltd ari mutariri mazano uye kushanda basa iri. Zvinonzi aronga kuita kutongwa mashandiro pakupera Sep. Now Sanjing Electric Engineeri ... Read more »
Portescap anotanga itsva 16DCT injini yayo yakakwirira torque DCT siyana Athlonix Motors. The 16DCT injini anogona kununura kuramba torque kuna 5.24 mNm ari kureba chete 26mm. The 16DCT utilizes simba Neodymium magnets a uye Portescap waJehovha nekusimba magetsi coreless magadzirirwo. The optimiz ... Read more »
Anozvininipisa vacuum ndechimwe handiest mhuri rokutsvaira midziyo yemagetsi anoshandiswa nhasi. Its nyore asi ichibudirira design zvaitwa kure nokuva kuchenesa guruva uye zvimwe zvacho diki kure hukawanika noruoko, uye akashandura imba kuchenesa kuva rikurumidze uye zvakarurama nokukurumidza basa. Kushandisa chinhu bu ... Read more »
Mitsubishi Motors vachayeuka 54.672 motokari mu China ne matambudziko windscreen wipers. The Recall, unotanga musi waJuly 27, ndizvo kupinza Outlander EKS motokari kugadzirwa pakati Nov 23, 2006 uye Sept 27, 2012, maererano General Administration pamusoro Quality Rinotungamirira, Inspection uye ... Read more »
Piezoelectric ultrasonic Motors vane mbiri kuchikosha zvakanaka, kureva simba ravo yakakwirira arambe achirema dzavo nyore chivako, izvo zvose dzinobatsira miniaturization yavo. Takaita akavaka kumumvuri micro ultrasonic injini uchishandisa stator ane bhuku ingangoita cubic millimeter. Aimbova yedu ... Read more »
Global micromotor goho kwegore pamusoro-gore nokuwedzera 4.8% akamira mabhiriyoni 17.5 inokwana zviyero muna 2015,. Nemhaka mishandirapamwe kuti modernize kuti bhizimisi uye zvokushandisa, kuti goho riri kutarisirwa kusimuka kusvika pamabhiriyoni 18.4 inokwana zviyero muna 2016 uye nzira mabhiriyoni 23 inokwana zviyero muna 2020. China, pakukura manufact munyika ... Read more »